Madaxweyne Rouhani ayaa ku booriyey xoogaga siyaasada inay si wadajir ah u shaqeeyaan… – Hagaag.com
Madaxweyne Rouhani ayaa ku booriyey xoogaga siyaasada inay si wadajir ah u shaqeeyaan…
Posted on 12 Maajo 2019 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa ka digay in dalkiisu uu la kulmi doono waqtiyo adag iyadoo ay sabab u tahay cadaadiska dhaqaale ee ay wado dowlada Mareykanka oo cusbooneysiisay cunaqabateynta ka dhanka ah Tehran.
Rouhani ayaa sheegay asaga oo hadal u jeedinayey shir u dhaqdhaqaaqayaal siyaasadeed, “Iran waxay la kulmi kartaa dhibaato dhaqaale oo ka weyn tii ay la kulantay sideetamaadkii, markii ay saarneyd cunaqabateynta dowliga aheyd xilligii dagaalka lagula jiray Ciraaq”.
Rouhani ayaa ku boorriyay xoogaga siyaasadeed ee dalka in ay midoobaan oo si wadajir u wada shaqeeyaan si looga gudbo duruufaha, wuxuu afka ku dhuujiyey in la isu dhiibo cadaadiska Mareykanka ay tahay mid aan la aqbali karin.
Wuxuu ku daray “Maanta, ma sheegi karno haddii duruufaha ay ka fiican ama ka xun yihiin muddadii dagaalka (1980-1988), laakiin inta lagu jiray dagaalka nama heysan dhibaato dhinaca bangiyada ama iibka saliida ama soo dejinta iyo dhoofsiga, waxaa jiray oo keliya cunaqabateyn soo iibsashada hubka”, sida ay soo werisay wakaalada wararka ee Jamhuuriyada Islaamiga ee Iiraan IRNA.
Wuxuu ku daray “Cadaadiska cadawga ee dagaalka aan horey u soo marin taariikhda kacaankeena Islaamiga ah, laakiinse aniga ma quusan waxaan qabaa rajo weyn oo mustaqbalka, waxaan qabaa inaan ka talaabsan doona duruuftan adag, laakin waxaa shardi u ah in aan middowno”.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka baxay heshiiskii nuclear-ka, wuxuuna Tehran ku celiyey sanadkii hore cunaqabateyn, tan iyo markaasi waxaa si tartiib ah u joogsaday dhoofinta saliida Iiraan iyo hoos u dhac ku yimid maal gashiga shisheeyaha.
Trump ayaa ugu baaqay hoggaamiyeyaasha Iiraan Khamiistii in ay wadahadal kala galaan joojinta barnaamijkooda nukliyarka, waxaana uu sheegay inuu miiska saaran yahay iska horimaad millatari.